Amboary ny efijery finday tapaka: dingana hanamboarana sy hanamboarana efijery | Androidsis
Nerea Pereira | 03/05/2021 09:00 | About us
Ny zavatra voalohany tokony ho ao an-tsaina rehefa mitady fomba amboary ny efijery findainao, dia ny tsy tokony hanarahanao ny dingana amin'ny fika tsy mijanona amin'ny Internet. Na dia toa maharesy lahatra azy ireo aza izy ireo, votoaty diso izy ireo, ary misy YouTuber maro izay nanandrana sy nandà ny 90% tamin'ireo fitaka ireo.
Ka raha sendra sendra mahita horonantsary iray ianao izay ilazan'izy ireo aminao fa amin'ny paompy kely dia azonao atao ny manamboatra ny efijery findainao, aza atao atahorana. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria azo inoana fa ho vitanao fotsiny ny handrava azy, ary tena havela tsy hanana terminal anao ianao. Noho izany, Izahay dia hanazava izay tokony hataonao raha mahita ny tenanao amin'ity toe-javatra ity ianao, satria misy dingana roa tokony harahina alohan'ny hitondranao ny findainao hanamboarana. Satria eny, izany no hany safidy tena izy sy azo itokisana anananao.
1 Inona no hatao alohan'ny hanamboarana ny efijery findainao
1.1 Ny zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny hanamboarana ny efijery findainao
1.2 Ny dingana manaraka arahinao: avereno
2 Aiza no hitondranao ny findainao hanamboarana azy
Inona no hatao alohan'ny hanamboarana ny efijery findainao
Afaka efa afaka ianao mitandrema tsara ary mahazoa fonony tsara indrindra, Mendrika hadisoana ny hianjeran'ny telefaoninao amin'ny tany na hidona amin'ny zavatra manimba ny efijery. Fa tsy isalasalana fa ny lehibe indrindra amin'ny aretim-po dia ilay iaretantsika rehefa miankohoka amin'ny tany izy, ary atsanganay miadana izy mivavaka amin'ireo andriamanitra rehetra fantatsika fa tsy nisy nanjo azy.
Efa fantatsika ny vidiny hanamboarana ny efijery amin'ny Galaxy Fold
Saingy tsy mandeha foana izany, ary mahita tena lozam-pifamoivoizana izahay, na fiatoana tsy dia matotra izay mamela anao hanohy hampiasa ny terminal anao. Saingy mety hiharatsy kokoa izany, noho izany mba hanamboarana ny efijery findainao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny orinasa mpanamboatra ianao amin'ny toe-javatra. Saingy araka ny efa nolazainay, alohan'ny hanamboarana azy io dia misy dingana maromaro izay tsy maintsy arahinao, ary hanazava azy ireo aminao eto ambany izahay.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny hanamboarana ny efijery findainao
Raha tsara vintana ianao fa mbola mandeha ny telefaoninao, Alohan'ny hanamboarana ny efijery dia misy zavatra tsy maintsy hataonao. Midika izahay fa tsy maintsy miaro ny angon-drakitrao ianao ka tsy afaka mahazo miditra amin'ny fiainanao manokana ilay olona hanamboatra ny fitaovanao. Ary ho an'ity dia tsy maintsy maka tahaka ny tahirin-kevitra ianao ary hamafa azy amin'ny terminal anao.
To be able kopia ny angona avy amin'ny telefaona findainao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mametaka ilay fitaovana manontolo. Mikasika ireo rindranasa izay alainao, ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny rafitr'izy ireo, ka tsy maintsy hidiranao tsirairay avy ary ho azonao antoka fa hampavitrika azy raha tsy izany. Zava-dehibe kokoa izany amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, toy ny Telegram, WhatsApp ary ireo solony. Mazava ho azy, aza adino ny mitahiry ny fifandraisana rehetra.
Raha toa ka tsy miasa intsony ny efijery findainao noho ny fiatoana dia aza manahy fa tsy ho very daholo. Tsy maintsy ampifandrainao amin'ny PC ianao mba hahafahanao miditra amin'ny data rehetra. Raha manana terminal Android ianao dia ho afaka hiditra amin'ny sary sy ny hafa. Raha misy fitaovana iOS dia mifanaraka tsara ny zava-drehetra, ka tsy hanana olana ianao. Ary raha manana faka ianao, dia ho afaka hampiasa rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo, toy ny Migrate sy Titanium Backup, na dia zavatra tokony apetrakao mialoha aza ity.
Ny dingana manaraka arahinao: avereno
Misy antony iray nanomezana baiko anao hametraka nomaniny ho solon'izay rehetra anananao alohan'ny hanamboarana ny efijery findainao, ary izany dia mila hamerenanao azy io. Averina indray, raha tsara vintana ianao fa na eo aza ny efijery tapaka dia miasa ihany, Avelanay anao ny dingana hanaraka anao hamerenana amin'ny toeran'ny orinasa, izay efa nanala ny zava-drehetra ka toa nivoaka avy tao anaty boaty fotsiny.
Raha Android ny terminal anao, tsy maintsy mandeha any amin'ny fikirana ianao ary avy eo dia ampidiro ny fizarana rafitra. Rehefa eto dia asehoy ireo safidy mandroso hahafahana miditra ao amin'ny Safidy fanarenana. Ho hitanao eto ny safidy hoe Miverena any amin'ny fanjakan'ny orinasa. Raha toa ka tsy asehon'ny sosona fanaingoana ny mpamorona anao ity safidy ity eto dia azonao atao ny mampiasa ny motera fikarohana hahitanao azy.
Raha manana iPhone ianao, mankanesa any amin'ny sehatr'asa ary mankanesa any amin'ny faritra General. Eto, saika amin'ny faran'ny safidy dia ho hitanao ny famerenana, ary afaka misafidy ianao raha hamafa ny atiny sy ny toerana rehetra mba hijanonana ho vaovao avy ao anaty boaty.
Raha indrisy tsy mandeha ny efijery findainao, ny fanananao finday Android dia mila manao reset mafy ianao. Vonoy ary alefa ny telefaona amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra herinaratra sy ny bokotra fanamafisam-peo miaraka amin'izay. Amin'izany no hidiranao ny safidinao Android anatiny, ary avy eo no hametrahanao ny safidy tsy maintsy safidinao hampiasaina amin'ny alàlan'ny bokotra off sy volume, izay amin'ity tranga ity dia mamafa ny data sy cache.
Averina, amin'ny tranga fananana iPhone izay tsy mandeha ny efijery dia miankina amin'ny rafitra fiasa ny fomba fiasa. Miaraka amin'ny macOS Catalina ary aorian'izay dia ho afaka hikaroka ny findainao avy amin'ny Finder ianao. Na dia amin'ny kinova taloha sy amin'ny Windows aza dia mila misintona iTunes ianao. Amin'io fotoana io dia ho afaka misafidy ny iPhone ianao ary amin'ny safidy hiseho dia ho hitanao ny bokotra Restore iPhone, ka tsy mila hikasika ny terminal anao ianao.
Aiza no hitondranao ny findainao hanamboarana azy
Ny fomba azo antoka indrindra hanamboarana ny efijery findainao dia ny fitondrana azy na mandefa izany any amin'ny serivisy teknika matihanina. Ao izy ireo manana mpanamboatra izay miavaka amin'ny marika amin'ny terminal anao, ka azo antoka ny valiny tsara. Ny olana amin'ny serivisiny dia matetika izy io dia manana vidiny somary avo kokoa raha oharina amin'ny hafa, saingy mazava ho azy fa ho lasa tany am-boalohany ireo kozatra.
Ianao koa dia manana eo am-pelatananao ny fivarotana fanamboarana tsy ofisialyTena mahazatra ny mahita farafaharatsiny ny iray amin'ireo izay manampahaizana manokana amin'ny fanamboarana telefaona, ary amin'ny ankapobeny dia mora kokoa ny vidin'izy ireo. Na eo aza izany, arakaraka ny ampiasana na ny faritra misy kalitao no ampiasaina dia hisy ny vokatra tsara na ratsy kokoa amin'ny fanamboarana. Ary tsy mitovy ny mandeha any amin'ny fivarotana manodidina raha tokony ho any BeMovil na The Phone House.
Ny tolo-kevitray tsara indrindra dia hoe, raha toa ka vaovao sy lafo ny fitaovanao dia mankanesa any amin'ny trano fivarotana ofisialy. Ary izany ve raha nanao fampiasam-bola tsara tamin'ny fitaovanao ianao dia azo inoana fa tianao kokoa ny manome antoka fa azo itokisana ny fanamboarana azy. Raha taona vitsy ny terminal anao ary tsy raharahianao raha ny vokany no tsara indrindra, afaka mankany amin'ny fivarotana antoko fahatelo ianao ary hitahiry vola betsaka kokoa.
Raha misy fiantohana ny terminal anao, azonao atao ny manararaotra azy hanamboarana maimaimpoana ny efijery finday. Farany ary raha sahy ianao satria olona mahay ianao, misy pejy toa iFixit izay manazava ny fomba anaovanao azy, ho fanampin'ny fitaovana ilainao. Fa raha mijery akaiky ianao dia avo kokoa ny fandaniana, ka tsara kokoa ny mitondra azy any amin'ny tranonkala matihanina hanamboarana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ahoana ny fanamboarana ny efijery findainao
Ny fampiharana tsiambaratelo tsara indrindra ho an'ny Android